आफ्नी जिवनसंगीनिलाई रानी बनाएर राख्छन यि राशि भएका पुरूषहरूले !! | सुदुरपश्चिम खबर
आफ्नी जिवनसंगीनिलाई रानी बनाएर राख्छन यि राशि भएका पुरूषहरूले !!
कन्या राशीः खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन्। घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् ।
कन्या राशीः खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन्। घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् । (gnewsnepal बाट सभार)
बैतडीका तरुण दल अध्यक्ष घनस्याम भट्ट महिलासँग संकास्पद अवस्थामा फेला !!
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा पहिलोपटक वित्तीय क्षेत्रको पहुँच, ऋण खाताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै !!